I-Semalt: I-Web Scrapers. Indlela Elula kakhulu Yokusebenzisa I-Software Scraping Software
amawebhusayithi. Njengoba ukususwa kwedatha yewebhu kuye kwaba yinto evamile emabhizinisini, ezinye izingosi zinikeza ama-web scrapers mahhala ngenkathi enye ibanikeza njengamasevisi okufanele ukhokhele. Elinye lamathuluzi wokukhwabanisa wewebhu kakhulu yiWeb Scraper.
Nge-Web Scraper, ungakha database yakho yamakheli e-imeyili wezinkampani, noma ungakha imikhiqizo yakho noma i-e-shop catalog. Enye yezinzuzo ezingcono kakhulu ezinikezwa yile thuluzi ukuthi oxhumana nabo bekampani bangalandwa ngokungaziwa kusuka kumawebhusayithi amaningi ngejubane elimangalisayo futhi ngokunemba okuphakeme! Kanti futhi okuqukethwe okukhishwe kungagcinwa emafomethi ahlukene nakwezinye izindawo ukuze kusetshenziswe noma kunini lapho udinga khona - cheap vps hostings. Nazi ezinye zezici eziphezulu zesofthiwe.
Isivivinyo samahhala se-14
Isivivinyo samahhala sama-14
I-Web Scraper iza nesilingo samahhala sezinsuku ezingu-14. Lokhu kusho ukuthi ungazama isofthiwe mahhala amasonto amabili. Ngemva kwalokho, uma uyayithanda, ungayithenga.
Akudingi ulwazi lohlelo
I-Web Scraper ayidingi ulwazi kwanoma yiluphi ulimi lohlelo noma izikripthi. Konke okudingeka ukwenze ukuchofoza okumbalwa kwegundane bese ukhetha idatha edingekayo yesikhumba.
Ungakwazi ukusingatha iziphequluli eziningi ngesikhathi esifanayo
I-Web Scraper ingathatha idatha kumakhasi amaningi wewebhu ngokukodwa, futhi ingasebenza futhi kuziphequluli eziningi ngesikhathi esisodwa. Lokhu kusindisa isikhathi sakho namandla.
Amandla okukhipha idatha kusuka kumawebhusayithi aphephile
Leli thuluzi lokuhlunga lewebhu linamandla okukhipha idatha nge-proxy amaseva ukuze lilande iphinde lisebenzise idatha kumawebhusayithi aphephile kakhulu. ukusetshenziswa kwama-proxy amaseva. Lesi sici siwusizo kumabhizinisi akhipha idatha kusuka kumawebhusayithi aphephile njenge-LinkedIn ne-Facebook.
Lingaguqula idatha ehlongoziwe emafomethi amaningana
Ithumela idatha kumafomethi ahlukene. Ingakwazi ukuthumela idatha ekhishwe ku-TXT, i-XML, namafomethi we-CSV kuye ngokufundiswa komsebenzisi. Eqinisweni, ingashintsha idatha efanayo zibe amafomethi amathathu ahlukene.
Ihlinzeka isikhombimsebenzisi esibonakalayo somsebenzisi
Ithuluzi linikeza isikhombimsebenzisi esibonakala kalula futhi esisebenzisekayo, ngakho-ke awudingi ulwazi lwezobuchwepheshe oluzosetshenziswa it. Awudingi futhi ama-tutorials noma ukubonisa ividiyo ukuyisebenzisa.
Ngenxa yezici zayo eziphakeme, ungase ucabange ukuthi kubiza imali. Kodwa-ke, kufike ngentengo enengqondo.
Itholakala ngezihumusho ezimbili
Kunezinguqulo ezimbili zeWeb Scraper. I-version yokuqala ivumela ukuqhathaniswa nokunikezwa komncintiswano nemikhiqizo. Inguqulo yesibili isetshenziselwa ukukhipha othintana nabo. Ungakhetha inguqulo efanelekayo ibhizinisi lakho. Noma kunjalo, akuyona into engavamile ebhizinisini elilodwa ukuthenga kokubili izinguqulo. Ungenza okufanayo ukuze uthole imiphumela engcono.
Ekuphethweni, njengoba ungenayo into yokulahlekelwa, kungani ungazami ukuhlolwa kwezinsuku eziyi-14. Ungaqeda ukuyithenga ngemva kwesikhathi sokuvivinywa.